Imihlangano yabantu abathandana nabo kusukela ocansini ngayinye enhle ibangela imizwa yabo ekhethekile. Futhi ezimweni eziningi, umqondo wale mizwelo cishe akunakwenzeka. Esikhathini esilandelayo uma owesifazane ehlukaniswa ngobulili obunamandla, angakwazi ukuziphatha ngendlela engalindelekile, ngendlela, akakwazi ukuchaza lokhu kuziphatha kuye.
Owesifazane oyedwa uyakwazi ukugcina ubuhlobo obuhle nobungane nomuntu wangaphambili ngaphandle kobunzima, futhi kunezinhlobo zabesifazane abathi, yonke iminyaka esebenzi ndawonye, ​​bavame ukufihla enhliziyweni yabo intukuthelo enkulu futhi bangathandi ngothando lwabo lwangaphambili. Ngenxa yalesi sizathu kuphela, ukuthola impendulo yokugcina embuzweni wokuthi ungaziphatha kanjani nomuntu owayengumthandi futhi ngabe kufanele uvumelane naye emihlanganweni, kunzima kakhulu. Masize sonke sizame ndawonye ukuqonda lo mbuzo obuthakathaka ngosizo lwezibonelo zezimpilo ezivame kakhulu.
Uma umthandi engumngane nomuntu owayengumthandi
Okuyinhloko yemihlangano ne-ex-lover / inkosikazi
Uma kwenzeka ukuthi lo muntu abe ngowokuqala ukuvela endimeni yokuqalisa ukuhlukana kobudlelwane, owesifazane kufanele aqondiswe ngumthetho oyinhloko - ungabonisi ukuthi uphelelwe amandla noma uyazisola ngalokho okwenzekile. Futhi lokhu akufanele kuxhomeke ngisho nokuthi ubuhlobo buhlala isikhathi eside kangakanani nale ndoda. Uma kwenzeka kanjalo emva kwesikhathi esithile umlingani wangaphambili enikeza ukuhlangana, owesifazane, ngaphambi kokuba avume, kubalulekile ukulinganisa izinzuzo nezindleko bese kuphela enikeza impendulo yabo. Yiqiniso, kwenzeka ukuthi le nkosikazi ingase ibe umqambi wemhlangano yabathandi bokuqala. Lokhu, okokuqala, kungathembeka esimweni esingokomphefumulo sengqondo somfazi oqondiswa izinkumbulo nomkhuba wokubona lo muntu eceleni kwakhe. Kodwa kufanele kuqaphele ukuthi imihlangano enjalo ayisoze iqale ukuvuselela ubudlelwano noma ivuselele ubungane obuqinile. Ngezinye izikhathi ukuhlukana okungenacala kwabathandana ababili bangaphambili kungaba uhlobo lwesifiso esijwayelekile esihlokweni esithi: "Uhlala kanjani ngaphandle kwami?".
Uma abathandi bokuqala beshade nabo
Esimweni esinjalo, kunzima kakhulu ukushiya ubudlelwano phakathi komunye nomunye, ikakhulukazi ngokobulili obuhle kakhulu. Lapha abathandi bokuqala babevame ukuhlanganiswa hhayi kuphela ngocansi, kodwa nangezinye izici eziningi zokuphila. Yiqiniso, akunakwenzeka ukuba ube umngane nomyeni wangaphambili, kodwa omunye akufanele abe yizitha noma.
Kodwa noma yini engashiwo kukhona amahemuhemu, nokuphila kaningi ngemva kwesikhathi esithile ngemuva kokuphumula kushade naye. Ngokuvamile, imihlangano enjalo iyenzeka "ezingeni lebhizinisi" futhi ifakwe isimo esimnandi (uma-ke, lo mbhangqwana awunawo okumele uhlanganyele ngawo) futhi ushiya ukubonakala okuhle.
Uma kukhona oshade naye wamanje
Lesi simo sivame kakhulu emphakathini wanamuhla. Okuyinhloko yukuthi owesifazane, ngenkathi eshada, uqhubeka ehlangana nomuntu wangaphambili. Yiqiniso, imihlangano enjalo ayikwazi ngaso sonke isikhathi ukuba nezocansi, kodwa kunalokho ukukhangwa ngokomzwelo, kodwa akusizi ngalutho ukukhuluma ngalokhu kumlingani wakho noma ukunikeza konke ngaphandle kwemizwa yakho. Ngakho-ke, uma lokhu kwenzeka, ungatshele izindaba zakho zesikhathi eside zomfazi ngokuthi umlingani wakho wangaphambili uhlala kanjani manje nakho konke okukukhathazayo. Futhi ngaphezu kwalokho, akufanele ubheke isizathu sokuba wethule amadoda amabili komunye nomunye, noma ngabe ayenemihlangano yobuhlobo futhi engavamile.
Ngolunye usuku empilweni yabathandi bokuqala
Ngokusho kwengqondo eziningi, uma izithandani zangaphambili zihlala zingabangane, hhayi izitha, ezimweni eziningi imihlangano iphela ngocansi (ngisho noma ingekho emhlanganweni wokuqala, kodwa kwenzeka). Kodwa emva kobusuku obuthandekayo, ngokuvamile owesifazane uqala ukuhlushwa ukungabaza nemibuzo. Ngakho-ke, uma le nkosikazi ifuna ukuqhubeka nale mihlangano nomuntu odlulile, kubaluleke kakhulu ukuba ungangeni esilingweni futhi ungaqali ukuhlukanisa ubuhlobo noma ukuphinda uphinde udonse isikhathi esidlule. Phela, imizamo enjalo yokwehlisa indoda engalungile nayo yonke into ehlobene nayo, izomenza lo mhlangano ube ngowokugcina, futhi ubungane bungenakwenzeka. Futhi ekugcineni, uma ungabaza isidingo sale mihlangano, kungcono ubalahle futhi uqhubeke nokuphila kwakho!
Inkinga yabesifazane yobudala obuphakathi
Indlela yokuvikela kahle iphuzu lakho lokubuka
Amasokisi okushisa okufudumele
Isidlo sesidlo ngesifo sesisu
Leshchina emithi yomuthi
Ikhekhe lama-potato ekhekhe
Ubuhlobo bomuntu omdala, indodakazi endala nonina
I-Eurovision-2017: kungani ivinjelwe ukungena kwe-Yulia Samoilova, i-puncture engavamile yeSBU
I-trout ebhakiwe ne-garlic sauce
I-Tofu skewers ne-coriander sauce
Tart nge-asparagus nelamula